अर्को महिनादेखि २ लाख लिटर दूध खेर जाने ! — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » अार्थिक → अर्को महिनादेखि २ लाख लिटर दूध खेर जाने !
अर्को महिनादेखि २ लाख लिटर दूध खेर जाने !
August 24, 2015३६६ पटक
७ भदौ, काठमाडौ । स्वदेशी डेरी उद्योगले आगामी महिनाबाट दैनिक करिब २ लाख लिटर दूध खेर जाने बताएको छ । असोजताका दूध उत्पादन बढ्ने तर डेरी उद्योगहरुसँग त्यो किन्ने क्षमता नभएकाले खेर जाने उनीहरुको भनाइ छ ।
ठूलो मात्रामा उत्पादित घ्यू स्टक रहेकाले थप दूध किन्न सक्ने अवस्था नरहेको डेरी उद्योगीहरुको भनाइ छ । यतिबेला करिब सवा अर्ब रुपैयाँको स्वदेशी घ्यू डेरीको गोदाममा थन्किएको छ । त्यो बेच्न नपाए थप दूध किन्न नसक्ने डेरी उद्योग बताउँछन्, नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
विदेशबाट आयात हुने सस्तो घ्यूका कारण स्वदेशी घ्यू नबिकेको उद्योगी बताउँछन् । स्वदेशी उत्पादन बिक्री हुने वातावरण बनाउन सरकारले आयातित घ्यूमा लाग्ने भन्सार महशुल बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
विदेशबाट आयात हुने घ्यूमा कम भन्सार लाग्ने भएकाले त्यो स्वदेशीभन्दा सस्तो परेको र सस्तोसँग महंगोले प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेको डेरी उद्योगीको भनाइ छ ।
डेरी उद्योगीले कृषि मन्त्रालयलाई आयात हुने घ्यूको भन्सार महशुल नबढाए किसानबाट दूध किन्न नसकिने जानकारी गराइसकेका छन् । उद्योगीको भनाइसँग मन्त्रालय पनि सहमत छ ।